Imfashini eqhubekayo: ukuthi iyini, izici namathiphu | Green Renewables
IsiJalimane Portillo | 20/04/2022 12:00 | Imvelo
Ama-Ecolabel avame ukuza phambili uma kukhulunywa ngawo imfashini esimeme, izingxabano ezihlobene nokukhiqizwa ezimbonini ezikude, kodwa umzamo omkhulu wokuxazulula kanye nezindwangu zemvelo eziningi ezingenayo imikhiqizo enobuthi. Ngenhlanhla, lo mbono uqinisekiswa emhlabeni wonke ngenxa yokwanda kwezinkampani zamazwe ngamazwe kanye nosomabhizinisi abasebasha abanikeza inguquko entsha emcabangweni wemfashini esimeme.
Ngenxa yalesi sizathu, sizonikezela lesi sihloko ukuze sikutshele konke okudingeka ukwazi mayelana nemfashini esimeme, yiziphi izici zayo kanye nezinzuzo.
1 Imfashini eqhubekayo
2 Imikhuba yemfashini eqhubekayo
2.1 ungathengi kakhulu
2.2 Tshala imali emikhiqizweni yemfashini esimeme
2.3 Ungakhohlwa imfashini yakudala nezingubo zamasekeni
2.4 Ukuqasha nakho kuyinketho
2.5 Gwema i-ecoposturing
2.6 Qonda umthelela wezinto zokwakha kanye nezindwangu mathupha
2.7 Cabangela ukuthi ubani owenza izingubo ozigqokayo
2.8 Bheka amabhrendi azinikele kwisayensi
2.9 Bheka amabhrendi anomthelela omuhle endaweni ezungezile
Izisekelo zemodeli yebhizinisi lemfashini esimeme ziyadlula ukulondolozwa kwemithombo yemvelo, umthelela ophansi wemvelo wezinto ezisetshenzisiwe (okumele ikwazi ukufakwa ngokuhamba kwesikhathi ochungechungeni lokugaywa kabusha), ukuncishiswa kwe-carbon footprint nokuhlonipha umnotho kanye nendawo yokusebenza. izimo zabasebenzi abathintekayo kusukela ekusetshenzisweni okuluhlaza kuze kufike lapho kudayiswa khona.
Imboni yezemfashini isivele izishaya isifuba ngabasiki bengqephu abadumile, abamodela kanye nosaziwayo abangompetha bemfashini esimeme. Laba bahlanganisa uLucy Tammam, Stella McCartney, Frock Los Angeles, Amour Vert, Edun, Stewart+Brown, Shalom Harlow kanye noSummer Rayne Oakes.
Imfashini esimeme kancane kancane ithola indawo yayo embonini. Futhi kube nokukhula ekuhlelweni kwemincintiswano, imikhosi, amakilasi, izinhlelo zokufaka, ulwazi lochwepheshe kumabhulogi nokunye.
Isibonelo, i-Portland Fashion Week, esanda kuqedwa e-US, ithathe amaphesenti angu-100 kuphela amadizayini alungele imvelo. Enhlokodolobha yaseSpain, i-Circular Project Shop yavulwa kulo nyaka ngomzamo wokuthola indawo emqhudelwaneni waseMadrid ngokunikeza izingubo ezisimeme. ISustainable Fashion Days nayo ibanjelwe eMadrid iminyaka emine. E-Argentina, I-Verde Textil inikezela ngemikhiqizo engenamthelela oyi-zero kwezemvelo nokuzibophezela okungu-100% komphakathi, kuyilapho ithengisa ku-inthanethi.
Icala elifanele ukunakwa okukhethekile yilelo lohlobo lwe-Heavy Eco, okuyinkampani yemfashini yokuqala eyasungulwa emajele, ekhiqiza izingubo ezisimeme. Ngaphezu komsebenzi wokuhlanganiswa kabusha kwezigebengu zase-Estonia ezingaphezu kuka-200 ezisebenze nenkampani, i-50% yenzuzo iya ukusiza abantu abangenamakhaya nezintandane edolobheni laseTallinn.
Imikhuba yemfashini eqhubekayo
Iyindlela ephumelela kunazo zonke yokuphatha amakhulu ezinkulungwane zezigidi zezingubo ezikhiqizwa emhlabeni wonke unyaka ngamunye. U-Harriet Vocking, umxhumanisi we-ejensi yamasu esimeme i-Eco-Age, uncoma ukuthi sizibuze imibuzo emithathu ngaphambi kokuthenga izingubo: «Yini esifuna ukuyithenga futhi ngani? Yini ngempela esiyidingayo? Sizoyisebenzisa okungenani izikhathi ezingamashumi amathathu ezahlukene”.
Tshala imali emikhiqizweni yemfashini esimeme
Manje njengoba sesinqume ukuthenga ngamehlo engeziwe, iyiphi indlela engcono yokweseka amabhrendi azimisele ngokusobala ukuthi asimeme. Isibonelo, u-Collina Strada, u-Chopova Lowena noma i-Bode basebenzisa izinto ezigaywe kabusha emiklamo yabo. Kukusiza futhi ukuthi uhlunge izinhlobo ezitholakalayo ngokusekelwe ohlotsheni lwezingubo abanazo emakethe, kungakhathaliseki ukuthi izingubo zezemidlalo ezizinzile njenge-Girlfriend Collective noma i-Indigo Luna, izingubo zokubhukuda ezifana ne-Stay Wild Swim noma i-Natasha Tonic, noma i-denim efana ne-Outland Denim noma i-Re/ Donate.
Ungakhohlwa imfashini yakudala nezingubo zamasekeni
Ngezinkundla ezifana ne-The RealReal, i-Vestiaire Collective noma i-Depop, ukuthenga imfashini yakudala nezingubo zamasekeni akukaze kube lula. Cabanga ukuthi ngeke nje unikeze ingubo ithuba lesibili, kodwa futhi uzosiza ekunciphiseni umthelela wemvelo wekhabethe lakho. Imfashini yevintage nayo inenzuzo enkulu yokuthi izingubo zayo ziyingqayizivele ngempela. Uma kungenjalo, bheka ukuthi u-Rihanna noma u-Bella Hadid ubukeka kanjani, abalandeli abakhulu.
Ukuqasha nakho kuyinketho
Uma sinomshado ongavamile noma i-gala (ngenxa ye-COVID, kunjalo), inketho eyamukeleka kakhulu ukuqasha izingubo zethu. Isibonelo, ucwaningo lwakamuva e-UK uphethe ngokuthi izwe lithenga izingubo eziyizigidi ezingu-50 njalo ehlobo futhi ligqoka kanye kuphela. Ithonya, akunjalo? Akubuzwa ukuthi kungcono siwukhahlele lo mkhuba, ikakhulukazi uma ubheka ukuthi umzuzwana ngamunye odlulayo ulingana neloli eligcwele imfucumfucu yendwangu (noma iphelele endaweni yokulahla imfucumfucu).
Amabhrendi abonile ukuthi siyaqaphela umkhondo wethu wemvelo. Yingakho ngokuvamile bezama ukucwila emikhiqizweni enezimangalo ezingaqondakali ezingadukisa noma zihlanekezele ngokuqondile ukusimama kwezingubo zabo. Ungakhohliswa ukuthinta okuluhlaza futhi ungeqeli ngale kwezimangalo "ukusimama", "luhlaza", "umthwalo wemfanelo" noma "ukwazi" ozokubona kumalebula amaningi. Hlola ukuthi abakushoyo kuyiqiniso yini.
Qonda umthelela wezinto zokwakha kanye nezindwangu mathupha
Lapho uthenga ngendlela eqhubekayo, kubalulekile ukuqonda umthelela wezinto ezilolonga izingubo zethu. Uma sikhuluma nje, umthetho ojwayelekile omuhle uwukugwema imicu yokwenziwa efana ne-polyester (impahla esiyithola ku-55% wezingubo esizigqokayo) ngoba ukwakheka kwayo kuhilela izinto zokubasa ezimbiwa phansi futhi kuthatha iminyaka ukubola. Kufanele futhi unake izindwangu zemvelo. Isibonelo, ukotini wemvelo usebenzisa amanzi amancane kakhulu (futhi awekho izibulala-zinambuzane) uma usukhulile kunokotini ovamile.
Okungcono kakhulu esingakwenza ukubheka izingubo ezinezitifiketi ezisimeme ukuze siqinisekise ukuthi izindwangu nezinto ezisetshenziswayo zinomthelela olinganiselwe emhlabeni: isibonelo, i-Global Organic Textile Standard kakotini noboya; Izitifiketi ze-Leather Working Group zesikhumba noma zokunamathisela isitifiketi se-Forest Stewardship Council semicu yerabha.
Cabangela ukuthi ubani owenza izingubo ozigqokayo
Uma ngabe lo bhubhane wenze noma yini, bekuwukugqamisa ubunzima bansuku zonke abasebenzi abaningi embonini yendwangu abadlula kubo. Ngakho kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi bathola iholo lokuziphilisa futhi banezimo zokusebenza ezinobulungiswa. Amabhrendi athembekile adalula ulwazi mayelana nezinqubomgomo zawo zamaholo, ukuqashwa nezimo zokusebenza efekthri, noma ngabe ziphi.
Bheka amabhrendi azinikele kwisayensi
Enye indlela yokubona ukuthi inkampani inentshisekelo yeqiniso yini ekwehliseni umthelela wayo kwezemvelo ukubona ukuthi izinikele yini ezindinganisweni ezisimeme zesayensi. Amabhrendi athobela inkundla yezinhlelo zokuqondisa ezisekelwe kwisayensi, okuhlanganisa uBurberry noma u-Kering, izikhondlakhondla zemboni yokunethezeka ngemuva kwe-Gucci noma i-Bottega Veneta, kudingeka ukuthi zithobele Isivumelwano sase-Paris sokunciphisa ukungcola.
Bheka amabhrendi anomthelela omuhle endaweni ezungezile
Izinkampani zokusimama ezifana noMara Hoffman noma i-Sheep Inc sezicabanga ukuthi zingaba nomthelela omuhle kanjani emvelweni ngaphezu kokunciphisa umthelela wazo. ukulima kabusha, umpetha wamasu ezolimo njengokutshala okuqondile noma izitshalo zokumboza, ithola ukwesekwa okwengeziwe kwemboni enomgomo ocacile: ukuthuthukisa izinga lenhlabathi nokuvikela izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo.
Ngethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nemfashini esimeme nokubaluleka kwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Imvelo » Imfashini eqhubekayo
Iyini ipaki yesizwe